Axmed Madoobe oo ka hadlay Qaraxii Kismaayo. — FAAFIYE.COM
Axmed Madoobe oo ka hadlay Qaraxii Kismaayo.
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam oo Saxaafada la hadlay ayaa ka tacsiyeeyay dadkii ku waxyeeloobay Qaraxii iyo weerarkii Argagixisadu ku qaaday Hotelka Madiina isagoona ka warbixiyay sida ay wax u dheceen.
Madaxweynahu wuxuu sheegay in 26 Qof ay ku dhinteen weerarka, halka 56 kalena ay ku dhaawacmeen, isagoo sheegay in Dadka dhintay ay ku jiraan qaar haystay Jinsiyadaha Dalal shisheeye ah.
Axmed Maxamed Islaam, Madaxweynaha Jubbaland, ayaa sheegay in Dadka dhintay ay ka mid yihiin 3 Kenyaan ah, Hal Canadian ah, Qof Biritish ah, Saddex Tanzanian ah iyo Laba Qof oo haysata dhalashada Dalka Maraykanka.
Waxaa kale oo uu Madaxweynahu sheegay in Labo Qof oo u dhalatay Waddanka Shiinaha ay kamid yihiin Dadka dhaawacmay, kuwaas oo hadda xaaladoodu aad u wanaagsan tahay.
Tirada Dhimashada Dadka ku dhintay Weerarki Kismayo oo Korortay